E-News | kollywood Update
गायीका सरु गाैतम र गायक विनायक बसेलकाे स्वरमा रहकाे ‘क्यारम तनी’ बाेलकाे गीत सार्वजनिक भएकाे छ । सराेज गाैतमकाे प्रस्तुति रहेकाे गीतमा महानायक राजेश हमालकाे साथमा प्रतिमा कंडेल, उत्तम के. सी र नारायण बहादुर पाण्डेकाे अभिनय देख्न पाईन्छ । गीतकाे शब्द/संगीत भिम बि. सि., एरेन्ज पुष्कर सुनवार र मिक्सिङ/मास्टरिङ दिपकराज विश्वकर्माकाे रहेकाे छ । देवेन्द्र पान्डेकाे निर्देशन […]
कलिउड अपडेट । प्रेमकथानक फिल्म ‘हिड्दा हिड्दै’ को सुटिङ सोमबारबाट सुरु भएको छ । गत असोजमा शुभमुर्हत गरिएको फिल्मको पहिलो दिनको स्पट गोदावरी भएको फिल्मका प्रस्तुतकर्ता सुशील पंगेनीले जानकारी दिएका छन् । मिलन आले मगरको निर्देशनमा आकाश श्रेष्ठ,सलोन बस्नेत, नवअभिनेत्री रेखा शाह, सानीया खान, बिकास थापामगर,बिबेक रामदाम,ममता पौडेललगायतका कलाकारको अभिनय रहने फिल्मको स्क्रिप्ट प्रस्तुतकर्ता पंगेनीले […]
कलिउड अपडेट । चर्चित गायक मंगोलियन हर्ट राजु लामाको स्वर रहेको गीत तिम्रो साथ विना शुक्रवार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको दरवारमार्गस्थित किङरिङ लञ्जवारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गीतको निर्माण टिमले गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेको हो । कुमार स्याङग्बाको शब्द रचनालाई निमा लामा दोङले संगीत भरेको गीत तिमी विनाको साथमा मंगोलियन हर्ट राजु […]
सञ्जिव पराजुलीको ‘यसरी नहेर मलाई’को भिडियो सार्वजनिक
कलिउड अपडेट । गायक सञ्जिव पराजुलीको नयाँ गीत ‘यसरी नहेर मलाई’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा होमनाथ न्यौपानेको शब्द, सचिन सिंहको संगीत तथा गोपाल रसाइलीको एरेन्ज छ । दी भ्वाइस अफ नेपालको स्टुडियोमा छायांकन गरिएको भिडियोमा गायक सञ्जिव फिचर्ड छन् । भिडियोमा वाद्यवादकहरु कृपेश ढकाल, एलेक्स डी प्रसन्न, अदित मगर र विक्रम थापालाई पनि […]
ट्रेलर मास्टर साहिलको निर्देशनमा बन्यो यस्तो म्यूजिक भिडियो , भिडियोमा पुजा र सन्तोष
कलिउड अपडेट । नेपाली फिल्मका आर्कषक ट्रेलर काट्न सिपालु साहिल खानले म्यूजिक भिडियो निर्देशनमा पनि हात हालेका छन् । भर्खरै एक गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । साहिल खानको निर्देशन रहेको यो भिडियोमा नायीका पुजा शर्मा र गीतका गायक सन्तोष बिक्रम खड्गी को अभिनय रहेको छ । सार्वजनिक यस गीतमा संगीत निर्मल बिकेको रहेको छ […]